Qareenadda Askarigii Somali-Maraykanka Ee Dilka Geystay Oo Codsatay In La Sii Daayo
Wednesday May 15, 2019 - 20:05:11 in Wararka by Mogadishu Times
Askarigaasi oo lagu magacaabo Maxamed Nuur waxaa horey loogu helay dilkii Haweeney lagu magacaabo Justine Daiamd oo u dhalatay dalka Australia, balse haysatay dhalashadda Maraykanka. Qareenadda u doodaya Askariga Maxamed Nuur waxay shalay buuxiyee
Askarigaasi oo lagu magacaabo Maxamed Nuur waxaa horey loogu helay dilkii Haweeney lagu magacaabo Justine Daiamd oo u dhalatay dalka Australia, balse haysatay dhalashadda Maraykanka. Qareenadda u doodaya Askariga Maxamed Nuur waxay shalay buuxiyeen Fayl ay Maxkamadda Heerka Degmo ee Gobalka Minnesota kaga codsadeen in la sii daayo Askarigaasi, maadaama uu geystay Dil aan ku-tala-gal ahayn. Qareenadda waxay kaloo sheegeen inuusan falkaasi u gelin si uu u dilo haweeneydii uu toogtay, balse uu ka shakiyey goobta uu ku sugnaa oo mugdi ahayd, iyo inuu u cabsaday nolosha Askarigii kale ee la socday.
Maxamed Nuur oo muddo 21-bilood ka tirsanaa Boliska dalkaasi waxa shaqada laga ruqseeyey markii dacwadda lagu soo oogay sannadkii hore, wuxuuna haatan ku jiraa Xabsiga.
Askariga oo 33-jir ah waxaa bishii hore lagu helay inuu dilay Haweeneydaasi bishii July 15-dii ee sannadkii 2017-kii, iyo fal-dembiyeedyadda dilka ee heerka 3-aad iyo Heerka 2-aad, kadib, markii ay dhegeysiga dacwadiisa muddo 3 isbuuc ah ka socotay Maxkamad ku taalla magaalladda Minneapolis.
Sida uu qorshuhu yahay Garsoorka Maxkamadda Heerka Degmo ee Gobalka Minnesota waxay xukunkiisa ku dhawaaqi doonaan bisha soo socota ee June 7-da, waxaana la hadal-hayaa inuu muteysan doono xabsi 12 sanno iyo 6 bilood ah.
Dhinaca kale, qoyska Haweeneydii la dilay waxay horey u buuxiyeen gal-dacwadeed ka dhan ahaa Maamulka magaalladda Minneapolis, waxaana la siiyey lacag magdhow ah oo dhan 20-million oo Dollar